राजमो नै जनताको विश्वासिलो शक्ति हो ः पौडेल
काठमाडौ“, भाद्र २१ । राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानको बाह«ौ“ दिन आज अभियान टोलीहरूले देशका विभिन्न भागहरूमा सभाहरू सम्पन्न गरेका छन् । प्यूठानमा ३ नम्बर अभियान टोलीले आज जिल्लाका २ स्थानमा सभा गरेको छ, जहा“ अध्यक्ष जीवन शर्मा सहितको रक्तिमको केन्द्रीय टोलीले सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू दिएको छ । पूर्वी नेपालमा अभियान चलाइरहेको १ नम्बर टोलीले झापाको चन्द्रगढीमा सभा सम्पन्न गरेको छ । टोली नम्बर २ र ४ भोलि हुने आ–आफ्नो क्ष्ँेत्रको कार्यक्रमको तयारीमा जुटेका छन् भने विकट कर्णाली क्षेत्रमा अभियान चलाइरहेका ५ नम्बर टोली आज मुगुबाट जुम्लातर्फ प्रस्थान गरेको छ ।
अभियानको ३ नम्बर टोलीले आज बिहान प्यूठानको खलङ्गामा पहिलो सभा सम्पन्न गरेको थियो । उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि राजमोकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले राजमो एक मात्र राष्ट्रवादी शक्ति रहेको बताउनु भएको छ । “राष्ट्रवादी पार्टी वास्तवमा कुन हो ? अब जनताले चिन्नै पर्ने बेला आएको छ ।” नेतृ पौडेलले भन्नु भयो– “बिप्पा लगायतका राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गर्न र गणतन्त्रलाई सा“चो अर्थमा संस्थागत गर्नका लागि जनताको भरपर्दो र विश्वासिलो एक मात्र पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो ।” राजमोलाई भोट दिएर के गर्ने ? यो पार्टी सरकारमा पनि जा“दैन भन्ने जनगुनासोतर्फ इङ्गित गर्दै टोली प्रमुख समेत रहनु भएकी नेतृ पौडेलले भन्नु भयो– “हामीले कहिल्यै पनि सरकारमा जानु हु“दैन भनेर कही“ भनेका छैनौ“ । यदि सरकारमा गएर प्रगतिशील कार्यक्रमहरू लागु गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र त्यो हैसियतको जिम्मेवारी जनताले हामीलाई दिन्छन् भने हामी जनताले दिएको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सदा तयार छौ“ ।” प्रमुख भनिने पार्टीहरूले जनताको आ“खामा छारो हाल्दै आइरहेको बताउ“दै उहा“ले अगाडि भन्नु भयो– “जनतालाई राष्ट्रघात र जनघातका पीडा दिने त्यस्ता पार्टीहरूलाई अब जनताले चिन्नै पर्छ । आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा उनीहरू फेरि पनि जनता झुक्याउन आउन सक्छन् । जनता अब उनीहरूका गुलिया कुरामा फस्नु हु“दैन ।” राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी शक्तिहरू छुट्टाउने मौका इतिहासले जनताको का“धमा दिएको बताउ“दै उहा“ले युगले दिएको त्यो जिम्मेवारी राजमो जस्तो क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा ठूलो सङ्ख्यामा विजय गराएर पूरा गर्न जनतालाई आह्वान गर्नु भयो । सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्का अतिथि राजमोका केन्द्रीय सदस्य वोमबहादुर खत्रीले नेपाल जस्तो मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली, त्यसमा पनि जातीय सङ्घीयता लागु भएमा यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता बच्न नसक्ने दावी गर्नु भयो । “सङ्घीयता एक्लै आएको छैन ।” नेता खत्रीले भन्नु भयो– “त्यो स“ग जोडिएर यहा“ जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश पनि आएको छ । त्यो भनेको के हो ? जनता स्पष्ट हुनु पर्दछ । हाम्रो देशमा सङ्घीयता नेपालबाट तराईलाई अलग गरेर भारतीय सङ्घमा गाभ्ने बदनियतबाट आएको छ ।” उक्त तथ्यलाई बुझेर नै राजमोले सुरुदेखि नै “सङ्घीयता चाहि“दैन, देश टुक्राउन पाइदैन” को नारा लगाएको स्मरण गराउ“दै उहा“ले आफ्नो मातृभूमिको रक्षाका लागि राजमो अझै जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार रहेको बताउनु भयो । राजमो खलङ्गा गाउ“ कमिटीका अध्यक्ष नारायण पाण्डेको अध्यक्षता र राजमो प्यूठानका सचिव राम पहाडीको सञ्चालनमा अघि बढेको सो सभामा अध्यक्ष जीवन शर्मा सहित रक्तिमको केन्द्रीय सांस्कृतिक टोलीले विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू दिएको थियो । रक्तिमले सभामा गीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दा जनमानस निकै उत्साहित भएको थियो । रक्तिमका ती गीतमा कतिपयले नाचेर र कतिले ताली बजाएर साथ दिइरहेका थिए ।
यस्तै अभियानको यस ३ नम्बर टोलीले प्यूठानको मरन्ठानामा पनि दिउसो अर्को सभा सम्पन्न गरेको थियो । राजमो मरन्ठाना गाउ“ समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर जी.सी. को अध्यक्षता र सचिव नरेन्द्र गिरीको सञ्चालनमा अघि बढेको सो सभालाई पनि दुर्गा पौडेल र वोमबहादुर खत्रीले नै सम्बोधन गर्नु भएको थियो । त्यहा“ पनि रक्तिमको केन्द्रीय टोलीले अध्यक्ष जीवन शर्माका साथमा निकै आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू दिएको थियो । कार्यक्रम सकेर टोली आज नै प्यूठानको मच्छीतर्फ लागेको छ ।
जातिवादी उन्मादले प्रताडित नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको अभियानको १ नम्बर टोलीले आज झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा कोणसभा सम्पन्न गरेको छ । उक्त सभालाई प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा मेची–कोशी क्षेत्रका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले आफूहरूस“ग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने हुति नभएपछि जातिवादीहरू भौतिक आक्रमणमा उत्रिएको बताउनु भयो । “नेपालमा सङ्घीयता यस कारणले उपयुक्त छैन भनेर हामी जो स“ग पनि सैद्धान्तिक वहस गर्न तयार छौ“ । तर सङ्घीयताका पक्षधरहरूस“ग त्यसको बचाउ गर्ने त्यस्तो कुनै बलियो सैद्धान्तिक तर्क छैन, जसका कारण नै उनीहरू हाम्रा विरुद्धमा भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका हुन् ।” नेता भण्डारीले भन्नु भयो– “तर हामी त्यस्ता आक्रमणहरूबाट गलेका छैनौ“ र मैदान छाडेर कदापि भाग्ने छैनौ“ । डलरको बलमा नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको आगोमा होम्न खोज्नेहरूको सपना हामी आफ्नो शरिरमा एक थोपा रगत रहुञ्जेलसम्म पनि लडेर पूरा हुन दिने छैनौ“ ।” नेता भण्डारीले आफूहरूस“ग मात्र जनमुक्तिको सही सिद्धान्त रहेको बताउ“दै अन्तिम जीत सही सिद्धान्तकै हुने दावी गर्नु भयो । अखिल (छैठौं) का केन्द्रीय सचिवलाय सदस्य तिलक गाहाले समेत सम्बोधन गर्नु भएको सो सभाको सञ्चालन छैठौंकै पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले गर्नु भएको थियो । टोलीले सभा सम्पन्न गर्नु पूर्व चन्द्रगढी बजारमा व्यापक रूपमा पोष्टरिङ, पर्चा वितरण गरेको थियो । टोली आज बिहान धरानमा पोष्टरिङ, पर्चा वितरण र जनभेटघाट गरी झापाको चन्द्रगढी पुगेको थियो ।
अभियानको ५ नम्बर टोली आज मुगुबाट जुम्लातर्फ प्रस्थान गरेको छ । ४ नम्बर टोलीले भोलि त्यही“ हुने कार्यक्रमको तयारी गर्दै डोटीको जोरायलमा आज विश्राम गरिरहेको छ । यस्तै भाद्र १८ गते काठमाडौ“ आइपुगेको अभियानको २ नम्बर टोली भोलि बिहान ७ बजेबाट रामकोट गाविस भवनको प्राङ्गणमा हुने सभको तयारीमा व्यस्त रहेको थियो । भोलि हुने उक्त सभालाई राजमोका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. ले प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्ने टोली नेता राजमोका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले बताउनु भयो ।